Mampiavaka ny UNWTO rehefa miditra ao anaty fandaharam-piaraha-miasa Ibero-Amerikanina ny fizahantany
Home » Travel Associations News » Mampiavaka ny UNWTO rehefa miditra ao anaty fandaharam-piaraha-miasa Ibero-Amerikanina ny fizahantany
Novambra 22, 2018
Ny Fihaonana an-tampon'ny firenena Ibero-Amerikanina faha-26 (La Antigua, Goatemalà, 15-16 Novambra) dia nofaranana tamin'ny fanambarana politika avo lenta momba ny fampandrosoana maharitra izay andraisan'ny fizahan-tany anjara asa lehibe. Ny fanoloran-tena, izay misy ny World Tourism Organization (UNWTO), dia manamarika ny fotoana voalohany nanasongadinana ny sehatry ny fizahantany ao anaty fandaharam-potoana fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisan'ny maro.
Ny filoha Ibero-amerikanina sy ny filoham-panjakana dia nanome baiko ny Sekretera jeneraly jeneraly-amerikana (SEGIB) amin'ny fampidirana fizahantany amin'ny portfolio ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana ny 22 mpikambana ao aminy, izay firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO ihany koa.
Ao amin'ny 'La Antigua Action Program ho an'ny fiaraha-miasa Ibero-amerikanina', ny baikon'ny mpitondra fanjakana sy ny governemanta dia miantso manokana ny SEGIB mba handrindra akaiky ny asany amin'ny fizahantany miaraka amin'ny UNWTO. Ny fikambanana roa tonta dia angatahina mba hiara-hiasa amin'ny fandraisana andraikitra hampiroborobo ny fizahan-tany maharitra izay misy fiatraikany amin'ny fampandrosoana, fiaraha-miasa amin'ireo mpisehatra lehibe amin'ny Agenda ho an'ny fampandrosoana maharitra 2030 an'ny Firenena Mikambana.
Ity fifanarahana ity dia tsy mbola nisy toa azy noho ny fampidirana ny fizahan-tany amin'ny drafitra iraisana iraisana iraisana iraisana iraisana amin'ny fiaraha-miasa. Tafiditra ao anatin'io fanoloran-tena io ny fizahantany sy ny toekarena miaraka amin'ny sehatry ny olana iray, manentana ny fanjakana hanao laharam-pahamehana ny politikam-bahoaka amin'ny fampandrosoana sy fitantanana fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra hampisondrotra ny fifaninanana.
Ny fandraisana anjara voalohany nataon'ny UNWTO dia ny famoahana ny "The Contribution of Tourism to the Sustainable Development Goals in Ibero-America", novokarina tamin'ny fotoan'ny Konferansa voalohany an'ny minisitry ny toekarena sy fizahan-tany Ibero-amerikana natao tamin'ny volana septambra, ary hatramin'ny Fihaonana an-tampon'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana.
Ity fisondrotana ity dia mety hanome feo ny fizahan-tany amin'ny sehatra politika sy politika avo indrindra, manome lanja ny toekarena ary manampy ny asan'ny UNWTO miaraka amin'ireo mpikambana sy mpiara-miombon'antoka manerana ny fanjakana Ibero-Amerikanina.
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fiainana amin'ny alina: tsy azo ihodivirana ny famelezana olona mpizahatany tany amin'ny clubclub Espaniola
Ny WTTC dia miarahaba ny Fikambanana fizahan-tany any Botsoana ho mpiara-miombon'antoka vaovao